We.com.mm - အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိုက်ဆံတွေဖြုန်းတီးမိနေပြီလို့ ဖော်ပြနေတဲ့အချက် (၄) ချက်…။
လစာတွေရနေပေမယ့် ဘယ်တော့မှအဖက်မတင်ဘူးဖြစ်နေတဲ့ အစားတစ်လိုင်းလေးတွေအတွက် သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…။ အစားသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ငွေကုန်ကြေးကျတွေ အရမ်းများနေပြီဆိုတာတွေက တော်တော်များများက သတိမထားမိတတ်ကြပါဘူး…။ ဒီလိုမျိုး သတိမထားမိတဲ့အချက်တွေကြောင့်လည်း ငွေကုန်ကြေးကျတွေ များပြားနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
၁. ပုပ်သိုးလွယ်တဲ့အစားစာတွေကို အများကြီးဝယ်ထားမိတာ…
ကိုယ်ကတော့ စားချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဝယ်ပေမယ့် အိမ်မှာစားမယ့်သူမရှိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆို အစားစာတွေကအများကြီးပိုလျံနေပြီး မကောင်းတော့ပဲလွှတ်ပစ်ရတာတွေထိပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်…။ ဒါကလည်း ပိုက်ဆံတွေကို ဖြုန်းတီးနေတဲ့အချက်တွေထဲမှာ တစ်ချက်အနေနဲ့ပါဝင်နေပါတယ်…။ ဒါကြောင့် ပျက်စီးပုပ်သိုးလွယ်တဲ့အစားစာတွေကို အများကြီးဝယ်ပြီးမစုထားမိဖို့က အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါပဲ…။
၂. ဘာမှစားစရာမရှိဘူးလို့ တွေးမိနေတာ…
ဒီအချက်ကတော့ ကိုယ့်မှာအဝတ်အစားတွေရှိနေပေမယ့် ဘာဝတ်ရမှန်းမသိတဲ့အခါမှာ ဝတ်စရာမရှိသလိုခံစားရစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ဒီလိုပါပဲ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အစားစာတွေကို များများဝယ်ထားမိတဲ့အခါမှာတော့ တကယ်ဆာတဲ့အခါမှာတော့ စားစရာမရှိသလိုခံစားရစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ဒါကြောင့် စားစရာတွေကို တစ်ခါထဲနဲ့အများကြီး ဝယ်မထားမိပါစေနဲ့…။
၃. ကျသင့်တဲ့ငွေပမာဏကို ပြန်မကြည့်တာ…
ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးလို့ ကျသင့်တဲ့ငွေပမာဏစာရွက်ကို ပြန်မကြည့်ပဲလွှတ်ပစ်တာမျိုးတွေကလည်း အစားစာပေါ်မှာ ပိုက်ဆံဖြုန်းတာတွေကိုလည်း ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ချေတွေများစေပါတယ်…။ ဘောက်ချာစာရွက်တွေကို ပြန်မကြည့်တာက ဒီတစ်ခါဝယ်တဲ့အချိန်မှာ အစားအသောက်အတွက် ဘယ်လောက်ဖြုန်းမိနေတယ်ဆိုတာကို မသိတော့ပဲ ငွေကုန်ကြေးကျတွေများနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
၄. လိုအပ်တာတွေကိုမှတ်ပြီး မဝယ်တာ…
လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုချမှတ်ပြီးမှ ဈေးဝယ်တာက ငွေကုန်ကြေးကျလျော့နည်းစေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ…။ လိုအပ်တာတွေကို မှတ်မထားပဲ တွေ့တာတွေကိုဝယ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ မြင်သမျှတွေကိုလိုအပ်တယ်ထင်ပြီး ဝယ်မိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ဒီအချက်ကလည်း သင့်ကိုအစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငွေကုန်ကြေးကျများစေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်…။
ကျန်းမာရေး မထိခိုက်အောင် အထာကျကျ ဘီယာသောက်နည်း
လည်ပင်းကြီးရောဂါဖြစ်ပွားနေပြီဆိုတာကို သိနိုင်တဲ့လက္ခဏာများနဲ့ ဖြစ်ပွားရခြင်းအကြောင်းရင်းများ
ခရစ္စမတ်ပွဲတော်နေ့ရဲ့ အရသာအရှိဆုံး စားသောက်ဖွယ်ရာ ( ၅ ) မျိုး